Iza toerana tsara kokoa hankafy ny pizza noho ny firenena izay namorona azy, marina? Italiana fitiavana, fitiavana, tia izany matsiro sakafo maivana-lasa-sakafo! Tsy mahagaga àry raha pizzas in Italia dia nivadika ho madio amin'ny teny kanto, ary farany, UNESCO-nankatoavina!
Ny lisitra no hanome anareo ambony-notch toeram-pisakafoanana ao Roma, Milan, Florence, Naples, ary Verona. Ireto ny ambony 8 pizzas in Italia.
Dia pick ny Pizzas In Italia, dia afaka handray anjara amin'ny santionany amin'ny "Tre Colori Pizza." telo samihafa sakafo Masiaka manao ho mena, fotsy sy maitso ny pizza, tahaka ny Italiana sainam-pirenena. Miezaha tsy hamela ny jalapeno peppers, Masiaka Sicilian saosisy, sy ny tangy fromazy fotsy mandoro ny vavanao. Raha hamita ny pizza rehetra ao 10 minitra na latsaka ianao mandresy ny loka. Ankoatra ny ity fitsipika ity, ianao koa tsy afaka misotro mihoatra noho ny 16 ounces ny rano na labiera. Ny mpandresy mahazo ny sakafo maimaim-poana, ny t-shirt sy ny sary nivoaka tao amin'ny ny rindrin'ny laza. ary, Inona no mitranga raha tsy hanaovanao azy? Afaka miezaka foana indray, dia tsarovy ity toerana ity rehefa mandeha ho any Roma.
Il Trapizzino dia tena tsy nampoizina na inona na inona ny pizza tia. Mifanohitra amin'ny hafa pizzas in Italia, pizzas eto mijery bebe kokoa tahaka ny telozoro mofo voasesika. Ny sasany miantso azy ireo nifanizina pizzas. Inside triangles nifanizina ireo dia afaka mahita sakafo toy ny soanambo akoho, baranjely sy ny mena orita. Ny koba Tena fahazavana, izay ahafahanao mihinana roa na telo sekely. io kely, Cozy toerana eo amin'ny manodidina an'i Testaccio dia feno olona foana. Noho izany dia tsara kokoa ny manao famandrihan-toerana, fara fahakeliny, ora vitsy mialoha.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra amin'ny rohy(www.saveatrain.com) ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-8-pizzas-italy/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / izany / tr na / en sy ny maro hafa fiteny.